स्थायी समितिलाई ओलीले दिए ‘रत्यौली’ को संज्ञा, पद खोसिने डर -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २०, २०७७ समय: २०:२८:४७
‘आजको बैठक पनि बल प्रयोग गरेर गर्नुभयो’
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विवाद सचिवालय बैठकबाटै मिलाउनुपर्नेमा पुनः जोड दिएका छन् । उनले पार्टी स्थायी समितिलाई अपमान समेत गरेका छन् । शनिबारको सचिवालय बैठकमा बोल्दै ओलीले अधिकांश सदस्यहरुले सचिवालयबाट निकास ननिस्केपछि दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न दिएको सुझावलाई प्रतिवाद गर्दै स्थायी समितिलाई ‘रत्यौली’को संज्ञा दिएका छन् ।
‘स्थायी समितिमा जाने भनेको के हो ? के स्थायी समितिमा रत्यौली खेल्न जाने हो ?’, ओलीको प्रश्न थियो । ‘आजपनि तपाईंहरुले बल प्रयोग गरेर बैठक भएको हो । यो बैठकमा बल प्रयोगकै हो । अव त्यो स्थायी समिति पनि बल प्रयोगकै हुने हो’, ओलीको आक्रोश थियो ।
प्रतिवेदनहरुमाथि स्थायी समितिमा छलफल गर्न नहुने ओलीको आशय बुझेपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीलाई बरु केही तयारी गर्न बाँकी रहे समय दिन सकिने धारणा राखेका थिए ।
‘तपाईंले स्थायी समितिमा राख्ने कुराहरुको तयारी वा गृहकार्य गर्नुपर्ने भए स्थायी समितिमा पनि समय लिनुुस्’, गौतमले ओलीलाई सुझाव दिँदै भनेका थिए ।
गौतमको यस्तो सुझाव सुनेसकेपछि ओलीले आफूलाई स्थायी समितिले बहुमत र अल्पमतका आधारमा हटाउन सक्ने बुझेर ‘त्यस्तो केही हुँदैन’ भन्दै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद नछोड्ने बताएका थिए ।
सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादलको कार्यदल बनाउने प्रस्तावमा भने विष्णु पौडेल र इश्वर पोखरेलले मात्रै समर्थन गरेका थिए ।
बादलले कार्यदलको प्रस्ताव ल्याउने वित्तिकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बोलेका थिए । उनले सुरुमै कार्यदल बनाउने प्रस्तावको ठाडै विरोध गरेका थिए ।
‘अब कार्यदलको कुनै काम छैन । यो औचित्यहीन कार्यदलको के काम ?’, बैठकमा खनालको भनाइ उदृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘पहिला त्यत्रो कार्यदल बनाएर गरेको सहमति त कार्यान्वयन भएन । अब फेरि किन कार्यदल ?’, नेता खनालको प्रश्न थियो । उनले फेरि कार्यदल बनाएर फरि आम कार्यकर्ता र जनतालाई भुल्याउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
‘आम कार्यकर्ता र जनतालाई कति दिन बन्दी बनाउने ? यो मिल्दैन । अब पार्टी कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यही कार्यान्वयन हुन्छ’, खनालको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि फेरि कार्यदलको कुरा गरेर अल्मलिन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘फेरि यस्तो कुरा गर्ने ? किन बनाउने कार्यदल ?’, नेता नेपालले प्रश्न गरेका थिए ।
नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि आफूलाई सुपरम्यान ठान्ने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रवृति त्याग्न सुझाव दिएका थिए । ‘अहिले पनि तपाई अझै आफुलाई सुपर म्यान ठान्नुहुन्छ । यस्तो गर्न छोड्नुस्,’ नेता नेपालको भनाइ थियो ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले कार्यदलले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै कार्यदलमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिमा गएर रत्यौली खेल्ने ? भनेर प्रश्न गरेपछि वामदेवले जवाफ दिँदै त्यस्तो घमण्ड नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।
‘तपाईंमा पनि ठुलो घमण्ड छ, तपाईका सल्लाहकारहरु पनि त्यस्तै छन् । तपाईंका सल्लाहकारहरु यस्ता छन् कि उनीहरु जहाँ गए, त्यही सखाप पार्छन् । त्यस्ता सल्लाकारहरु परिवर्तन गर्नुस्’, गौतमले सुझाव दिँदै भनेका थिए, ‘पार्टीमा संकट आएका बेला तपाईंका सल्लाहकारहरु जथाभावी बोल्दै हिडेका छन् । जसले झन् समस्या पैदा गरेको छ ।’
आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कार्यदलको औचित्य नभएको बताएका थिए ।
‘कार्यदल बनाउनुको कुनै औचित्य नै छैन’, प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
आजको बैठकमा झण्डै ३ घण्टा गलफती भएपछि आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा ओली र प्रचण्ड दुबैको प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।
बैठकपछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको संकट निवारणका निम्ति अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरु स्थायी कमिटीमा पेस गरेर छलफल गर्ने निर्णय भएको बताए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालयको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि अध्यक्षद्वय बीच भएको भेटवार्तामा पनि कुनै समझदारी नभएको बताए । सचिवालय बैठकमा पार्टीको संकट निवारणका लागि छलफल भएपनि आजै निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना नभएकोले स्थायी कमिटीमा पेस गर्ने निर्णय भएको बताए । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहदा आवश्यक परेमा अध्यक्षद्वय बीच र सचिवायलको औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठक समेत बसेर छलफललाई अगाडि बढाउन सकिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने छ ।